तिथि मेरो पत्रु » एक मानिसको अय्यूब रोमान्टिक व्यक्तित्व प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ
ठीक, त्यसैले तपाईं ज्योतिष ग्रहहरू को पङ्क्तिबद्धता आधारित अनुकूलता व्यक्तित्व लक्षण आकलन र भविष्यवाणी गर्न उमेरका लागि प्रयोग गरिएको छ कसरी थाहा?
... तपाईं जन्मने बेलामा जस्तै र चाहे कुराहरू तपाईं एक "पानी चिन्ह" वा "सूर्य चिन्ह छौं?"
खैर, म एक मान्छे गरेको Gig आधारित यस्तै प्रणाली विकास छु.
यो सही हो: काम को आफ्नो लाइन संकेत हुन सक्छ कि छैन तपाईं को दुई हुनेछ डेटिङ र संभोग रंगमञ्चमा "काम".
प्रणाली अत्यन्तै "वैज्ञानिक नहुन सक्छ तापनि,"वैधानिकता व्यापक अवलोकन आधारित छ, चिन्तन, व्याख्या, केही दस्तावेज क्षेत्र संग साक्षात्कार र खर्च समय "मुसाहरूलाई।"
सफलतापूर्वक संग हुक गर्ने तपाईं को बाहिर अनुमान काम केही लिन चाहनुहुन्छ भने, स्थायी परिणाम संग, पढ्न र पालन.
लेखक र कवि (यस Artsy प्रकार)
यी व्यक्तिहरू आदर्शवादी हुन जान्छन्, रोमान्टिक, र आकर्षक. तिनीहरूले आधा पूर्ण रूपमा लौकिक गिलास देख्न. तिनीहरू अक्सर ठूलो conversationalist छौं, र साँच्चै रमाइलो बाहिरै गर्न. तिनीहरूले आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र को पुरुष संस्करण छौं. तर होसियार: यी "स्वतन्त्र" कहिलेकाहीं प्रतिबद्धता phobic हुन र गायब सक्छ.
तपाईं एक शिक्षक डेटिङ हुनुहुन्छ भने, वर्ग को टाउको गर्न उत्प्रेरित.
शासन गर्न केही अपवाद छन् तापनि, सिकाउने मानिसहरू सामान्यतया तरिका हो, रोगी, जनावर र छोराछोरीलाई राम्रो, र एक "छिटो अध्ययन।" हो माथिको औसत तर्क कौशल संग ठूलो बहु-taskers हो कि यस तथ्यलाई जोडें.
लेखाकार र गन्ती CRUNCHERS
यस श्रेणी मा पुरुष सामान्यतया रूढिवादी प्रकार छन्. तपाईं यी cuties विस्तार उन्मुख भइरहेको मा "गणना" सक्छन्, समयनिष्ठ, साथै र पैसा pinchers. तिनीहरूले क्रूर स्तर. तपाईं महत्वाकांक्षी मा हुनुहुन्छ भने, सीधा-धर्मद्वारा, व्यावहारिक प्रकार, तपाईं यहाँ आनन्दित छौँ.
POLICE, Firemen, र पुरुष नर्स
"उद्धार रुचि छैन के महिला?"यी क्षेत्रहरु मा मान्छे साहसी हुन जानिन्छ, सुरक्षा, आधिकारिक, र मायालु. र म तिनीहरू राम्रो शारीरिक हालत मा सामान्यतया हुनुहुन्छ उल्लेख गर्नुभयो? सबैभन्दा धेरै मान्छे छन् उन्मुख, सम्मान र जिम्मेवारी को भावना संग.
तपाईं तिनीहरूलाई सम्बन्ध मा "बराबर" साझेदार हुन पाउन छौँ.
तपाईं तार्किक भने तपाईं यी अध्येता क्लिक छौँ, जानकारी, अंतर्मुखी, र राम्रो समस्या solvers हो; तिनीहरू पनि हो.
गरेको यो सामना गरौं, हामी सबैलाई थाहा छ वा यस श्रेणी मा कुनै दिनांक छ.
उहाँको "काम" एक ओछ्यान आलु रूपमा moonlighting छ.
उहाँले अझै पनि "। आफूलाई पाउन" गर्न प्रयास अथवा आफ्नो भाग्य मा तल सधैं छ गर्नुपर्छ. अथवा अझै पनि तीस मा एक रक स्टार हुनुको आफ्नो सपना पछि लाग्न खोजिरहेको छ. सही? भने त, तपाईं चाँडै आफ्नो विकल्प र "गुलाबी भौचर" उहाँलाई विचार गर्न सक्छन्.
नीलो कलर VS. ह्वाईट कलर–जो बेहतर छ?
निर्णय, निर्णय. के गर्ने एक केटी छ?
यो राम्रो निलो कलर मानिस वा सेतो कलर प्यारा केटासित छ?
खैर, यो सबै निर्भर.
यहाँ पनि 4-1-1.
ब्लू कलर मान्छे अक्सर तल पृथ्वीमा हो र आफ्नो हातले राम्रो. तिनीहरू संग हुन सामान्यतया सजिलो हुन्छ, चेक मा अहं संग. तुलनात्मक, तिनीहरूले सामान्यतया बढी ढल्कियो छौं.
सेतो कलर मान्छे धेरै पटक ठूलो कमाई क्षमता छ, मस्तिष्क हुन जान्छन्, र ठूलो समस्या solvers हो.
यी कठिन र छिटो नियम छैन तापनि, तपाईं धेरै डेटिङ अवस्थामा उनलाई लागू पाउन छौँ. जो पनि तपाईं के, बुद्धिमानी छनौट.
आखिर, प्रेम महत्त्वपूर्ण "व्यापार।" हो